सम्भोगमा महिलाले चरम-सुख पाउने ४ उपाय ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
सम्भोगमा महिलाले चरम-सुख पाउने ४ उपाय !
हाम्रो समाजमा परिवर्तन भइरहेको छ । मानिसहरूले सबै प्रकारका बिषयमा खुला रूपमा कुरा गर्न थालेका छन् ।
तर शारीरिक सुखभो ग सम्बन्धि कुरा अझै पनि वर्जित मानिन्छ र यस सम्बन्धि खुलेर कुरा गरिदैन । शारीरिक सुखभो ग त्यस्तै यो एक विषय हो, जुन सम्बन्धि कुरा गर्न मानिसहरू सहजै महसुस गर्दैनन्।
यदि तपाईलाई लाग्छ शारीरिक सुखभो ग केवल एक प्रकारले मात्र हुन्छ । तपाई गलत हुनुहुन्छ। तपाईलाई थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ महिलाहरुमा ५ प्रकारका शारीरिक सुखभोग का तरिका हुन्छन्।
४ शारिरिक सुखभोग
गो प्य अं ग :
महिलाको गो’ प्य अं ग अति विचित्रको छ । महिलामा हुने शारीरिक सु’खभोग प्रक्रियाले मात्र चर’म शा रीरिक सु’खभो ग प्राप्त हुन्छ भनेर मानिन्छ। र, यो शारी रिक सुखभो ग प्राप्त गर्न त्यती सजिलो भने छैन। गो’प्य अंग शारीरिक सु’खभोगको एक विशेष प्रकारको अंग हो । जुन कडा दबाबको साथ बारम्बार हिट गर्नुपर्दछ, र त्यसपछि मात्र गो’प्य अं गबाट शा रीरिक सु’खभो ग प्राप्त गर्न सकिन्छ।
क्लिटोरिस महिलाको गो’प्य अं गमा रहेको सानो अं ग हो जसले लाखौं स्नायुहरू समावेश हुन्छन । भ’गशेफ को हु डले ढाकिएको छ, यो अक्सर शा रीरिक सु’खभो गको लागी सम्झाना आउने गर्छ । त्यसैले क्लिटोरल प्राप्त गर्ने र यस भागलाई सक्रिए गर्ने उत्तम तरिका यसलाई औंलाहरूसहित गोलाकार गतिमा वा अगाडि–पछाडि हल्का रूपमा रगड्नु हो।
जब २ शा रीरिक सुखभो गका अंगहरु सँगै स्टिम्युलेट गरिन्छ र शारी रिक सुखभो ग प्राप्त हुन्छ। भने, यसलाई क म्बो अं ग भनिन्छ। उदाहरण को लागी, यदि गो’प्य अंग र क्लिटरिस एकैसाथ सक्रिए हुन्छन् भने, प्राप्त शा रीरिक सु’खभो ग एकदम तीव्र हुन्छ र यसको प्रभाव सम्पूर्ण शरीरमा देख्न सकिन्छ।
तपाईंले त्यस्तो व्यक्तिलाई भेट्नुभयो जो चु म्बन गरेर, का’उकुति लगाएर वा शरीरको कुनै अं गमा शा’रीरि क सु’खभो गका अंग बाहेक अरुबाट पनि शारीरिक सु’खभो ग प्राप्त गर्छ । अध्ययनमा यो प्रमाणित गरेको छ कि शा रीरिक सुखभो ग नदिने भनिएका अंग जस्तै कार, थाइज आदिले पनि प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दछ जुन केवल शारीरिक सु’खभो गको रूपमा लिइन्छ ।